मनोरञ्जन खबर – Page9– JanaSanchar.com
करणले काजोलसँग माफी मागे
कुनै समय करण जौहर र काजोलबिच उत्पात मित्रता थियो । तर, काजोलले अजय देवगणसँग बिहे गरेपछि उनीहरुको मित्रताको गाँठो फुस्कियो । यसबिचमा अजयसँग करणको झगडा पनि पर्‍यो । यसमा काजोलले आफ्नो श्रीमानलाई साथ दिइन् र करणसँग टाढिइन् । सम्वन्ध यतिसम्म बिगि्रयो कि करणले काजोलसम्म आफ्नो मित्रता भंग भएको सार्वजनिक घोषणा नै गर्न पुगे । आफ्नो हालै..
मिस्टर एण्ड मिस कास्कीको उपाधि मनिष र निकितालाई
१४ भाद्र पोखरा / पोखरामा आयोजित मोडलिङ रियालिटि सो मिस्टर एण्ड मिस कास्की २०७४ को उपाधि मनिष ओस्था र निकिता खड्गीले जितेका छन् । मंगलबार पोखरा सभागृहमा आयोजित ग्राण्ड फिनालीमा मिस्टर कास्की बन्न सफल मनिषले मिस्टर मल्टिमिडिया र मस्ट पपुलरको सव टाइटल समेत हात पारे । मिस कास्की बन्न सफल निकिताले वेष्ट पर्सनालिटि, बेष्ट फिगरको सव टाइटल समेत..
आमा बनेको एक महिना पूरा नहुँदै बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनविरुद्ध मुद्दा
आमा बनेको एक महिना पूरा नहुँदै बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। राष्ट्रिय बाल संरक्षण आयोगले उनकी छोरी निसाको मामिलामा उनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। गत जुलाई महिनाको अन्त्यमा सन्नी र उनका पति ड्यानिल वेबरले एक २१ महिने बालिका धर्मपुत्री बनाएका थिए। भारतको ‘केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)’ ले..
बलिउड डेब्यू गर्दै गरेकी काजोलकी वहिनीको १५ वर्ष जेठा इमरान हाशमी प्रेमि
१६ बर्ष पहिले रिलिज भएको चलचित्र ‘कभि खुशी कभि गम’मा काजोलकी वहिनी र बाल्यकालको करीना बनेर चर्चा कमाएकी मालभिका राज बलिउडमा डेब्यू गर्दै छिन् । मालविका बेलामा आफ्ना तस्विरहरु सामाजिक सञ्चालमा सेयर गरेर चर्चामा आउने गरेकी छन् । २३ बर्षीय मालविका बलिउडका सीरियल किसर इमरान हाशमीसँग 'क्याप्टेन नवाब' चलचित्रमा अभिनय गर्ने तयारीमा रहेको..
चित्त बुझ्दो अभिनय गर्न नपाएकी नायिका उषा बिबाहको दबाबमा !
म्युजिक भिडियोहरूमा खेल्दै आएकी अविवाहित नायिका एवम् मोडल उषा खनाललाई मन पराउने त धेरै होलान् l अविवाहित उषाले कहिले विवाह गर्ने हुन् त्यसबारेमा केही बताउँदिनन् । भन्छिन्, ‘विवाह कहिले गर्ने केही भन्ने अवस्था छैन । भाग्यमा जहिले लेखेको छ त्यहीले विवाह हुन्छ ।’ विवाहका लागि घरपरिवारमा दवाव रहेको उनको भनाइ छ । उषाले भनिन्, ‘मन पराउने..
बलिउडमा यस्ता थुप्रै स्टार्स छन् जो प्रेम सम्बन्धमा रहे र विवाह पूर्व एकअर्कालाई डेट पनि गरे । यद्यपी, यीमध्ये कतिको सम्बन्ध इन्गेजमेन्टसम्म पुग्यो तरपनि अन्तिम अवस्थामा विवाह टुट्यो । यसमा रबिना टन्डनदेखि सलमान खानसम्मको नाम समावेश छ । आज हामी तपाईंलाई यस्तै सेलिब्रिटीबारे जानकारी दिँदै छौं जसको विवाह अन्तिम अवस्थामा टुटेको थियो..
श्रीमती अन्त सल्केको थाहा पाउने चार तरिका !!
तपाईं आफ्नी श्रीमतीलाई कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ ? श्रीमतीबाट नजिकै बस्नुहुन्छ या टाढा ? तपाईंले आफ्नी श्रीमतीको विभिन्न क्रियाकलापबाट उसले धोका दिएको या नदिएको थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । यहाँ त्यस्ता केहि क्रियाकलापको बारे चर्चा गर्न खोजिएको छ । यी कुराहरुमा तपाइले बिशेष ध्यान पुर्याउन सक्नु भयो भने तपाइको बैबाहिक जीवनमा बिचलन आउदैन..
काजोलले चीनीयाँ चलचित्रमा पनि काम गर्ने
‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायंगे’ बाजीगर, कुछ कुछ होता है’ जस्ता चर्चित बलिउड चलचित्रमा काम गरेकी छिन् काजोलले । उनले बच्चाकै लागि भनेर फिल्मी करिअरको बलिदान नदिएको बताइन् । ९० को दशकमा काजोल अत्याधिक चर्चित थिइन् , जब अजय देबगणसँग विवाह गरिन् त्यसपछि उनले छानेर मात्रै चलचित्र खेल्न थालिन् । साथै उनले बच्चाको लागि कुनै त्याग गर्न नपरेको..
प्रियका चोपडामाथि अमेरीकामा यस्तो हर्कत
भारतीय अभिनेत्री प्रियका चोपडामाथि तस्वीरमा हेर्दा जबरजस्ती हर्कत गर्दै एक युवाले समातिरहेको देखिन्छ । तर यो रियल लाईफमा नभएर रिल लाईफको सुटिगंका क्रममा हो । पछिल्लो समय उनी अमेरीकाको विभिन्न सिरीयलमा खेल्दै छिन् र सुटिगंमा व्यस्त रहेकी छन्..